Andithethi nalomRharhabe, Andimfuni lo mGcaleka!! - Amava Heritage Publishers
“Baphela abantu bam kukuswela ukuqonda.”
Igama lekumkani yokugqibela ukulawula imbumba yobukumkani bamaXhosa nguPhalo. Wazala oonyana ababini abalinganayo ngokutyhoboza isizalo kwanangezindlu abazalelwe kuzo. Kungatshiwo kuthiwe uGcaleka uzalwa kwindlu-nkulu yokuqala kodwa naye uRharhabe uzalwa endlu-nkulu yesibini. Indlu-nkulu isekhohlo ngumfazi iNkosi okanye ikumkani emthathelwe sisizwe, kufuneka abe uzalwa ebukhosini apho asuka khona. Apha ekunene iNkosi okanye ikumkani izithandela umntu nje ongenagazi labukhosi ongazi kuzala ndlalifa yabukhosi bayo imzeke.
Umzekelo: Ukumkani Ngqika wazizekela uNothonto eXesi umamNgqosini ongenabukhosi banto wazala uMaqoma. Emva kweminyaka eyi22 kwazalwa uSandile nguSuthu unina inkosazana yabaThembu, yaba nguSandile ikumkani elandelayo ngesiXhosa.
Apha ke phakathi kukaGcaleka noRharhabe oonina babesuka kumakomkhulu bobabini, elabaThembu nelamaMpondo. Kwakungenakulunga ke kudelelwe naliphi ikomkhulu kuthiwe indlu yalo yencinci, yimfazwe leyo phakathi kwezi zizwe zendiselanayo okanye umdliwo wenkomo ezininzi.
Kwaza kwakhiwa ke iindlu-nkulu ezimbini, enye ekhohlo enye ekunene. Wathi esaphila uPhalo wanika uGcaleka ubukumkani wamcela umngeni ngokuhlasela uRharhabe. Ukunqanda olo lwabhecu wagxothelwa phesheya kweNciba uRharhabe ukuba asuke komkhulu eGcuwa aye kuzakhela obakhe ubukumkani. Wawela noyise uPhalo ukuze amncedise kulo mxhamsholo ukwenzela ukuba angazbe aphazamisane noGcaleka (yilento ke yabangela ikumkani yamaXhosa iphelele kwilali yaseZeleni).
URharhabe zange afike edekelwe phonoshono kweNciba apho walwa amadabi wadla izizwana ezazilapho ooDange, Ntinde, abaThwa, amaGqunukhwebe ndibala ntoni, wazakhela isizwekazi samaRharhabe esebenzisa le mbewu naleyo ebewele nayo ukusuka kokwabo. Yaba ke luqilima lobukumkani.
Akayekanga ukuhlasela, uzokufa xa ezama ukuginya imingqandandana yabaThembu ekwalapha kulo mhlaba ooFadana, Maphasa, Vusani. Bambulala ngemini enye nonyana wakhe uMlawu umkhuluwa kaNdlambe. UMlawu nguyise kaNgqika yena ozele amawele uMaqoma noNongwane ngo 1798 kwalandela ke ooSandile, Tyhali, Matwa, Xhoxho, Thente, noAnta. Kuba uNgqika ebeselula ukwenzeka kwale ngozi kwabanjiswa uNkosi Ndlambe umninawa kaMlawu abe ngukumkani wamaRharhabe.
Lilonke amaXhosa axandile ngobuGcaleka nobuRharhabe makunganhukutyhwana ke ngala magama kuba athetha umntu omnye. UGcaleka yiKumkani yamaXhosa jikelele. URharhabe wanele yindawo yakhe yokuba nguKumkani wesizwe samaRharhabe angamaXhosa. Ngoku kuphethe ukumkani Sigcawu nokumkani Sandile elowo elakhe icala, abalwi ngalento. Uyazazi uSigcawu ukuba ubuswa ziiNkosi ezikwicala lakhe noSandile ngokunjalo.
Ikumkani ke ayiyibusi enye ikumkani. URharhabe akasi ngxelo ngobume beeNkosi nabantu baphonoshono kweNciba kuSigcawu.
Phesheya kweNciba obona bukumkani bakha baba budala bunobunganga nangobukhulu nguDlomo abaThembu. Kukho ke nezinye izikumkani zamaMpondo, amaXesibe, amaBhaca, amaBomvane, kukho nezabeSuthu ze kubekho ke namaGcaleka. Ngapha kweli cala ikumkani inye nguSandile, zonke iiNkosi nezizwe zazo ziqubuda kuye: amaJingqi, kaMaqoma, imiNgcangathelo kaTyhali, amaGqunukhwebe kaKama, nalawo aselwandle kaPhatho, imiQhayi, imiDushane, amaNtinde kaTshatshu, amaBhele kaHebhe nakaMavuso, amaHlubi kaMhlambiso, amaGwali kaSogoni ka Ntaba njalo njalo.
Lumalakatha ke olunje olungangxengwanga lobukumkani bamaRharhabe. Ngexesha kuphethe uMongameli Mbeki kwamiselwa iKomishoni yokuhluza ubukhosi yaza yagqiba kwelokuba uRhulumente asoze arhume izikumkani ezimbini zesizwe esinye samaXhosa yabuhlutha ubukumkani bukaRharhabe kwathiwa uGcaleka uphethe yonke into engumXhosa. AmaRharhabe noKumkani wawo uMaxhob’ayakhawuleza Sandile afaka ibango kwinkundla zamatyala esilwela ilungelo lawo. Ithe ke inkundla ekugqibeleni abantwana bakaKumkani uNgqika badlelwe indlala mabanikwe into yabo, ngelishwa wabe sele esithele ukumkani ukufika kweso sigwebo kuba ityala eli latshala iminyaka.
Apha umlo wawuphakathi kwamaRharhabe noRhulumente, zange amaGcaleka ahluthe bukumkani bamntu. Bekani phantsi izikhali, fakani ezipokothweni loo minwe nikhombana ngayo kuba nibanye.
AAH!! Zanzolo 9 September 1873 – Maqoma Dies